Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 22
Mikaroka fametrahana Moments amin'ny namako
Copyright, 1909, avy amin'ny HW PERCIVAL.
MOMBA NY FAMONOANA.
Afaka mijery ao anatin'ny vatany ny olona iray ary mahita ny asan'ny taova isan-karazany, ary raha izany dia ahoana no hitrangan'izany?
Mety hijery ao anaty ny vatany ny olona ary mahita ireo taova samihafa miasa. Izany dia ataon'ny mpampianatra amin'ny fahitana, fa tsy ny fahitana izay ferana amin'ny zavatra ara-batana. Ny maso dia zarina hahita zavatra ara-batana. Ny maso dia tsy hisoratra hovitrovitra etsy ambany na ambonin'ilay oktava ara-batana, ary noho izany ny saina tsy afaka mandika an-tsaina izay tsy azon'ny maso ampitaina aminy. Misy ny hovitrovitra izay ambanin'ny ôtta ara-batana, ary koa ny hafa ambonin'izany. Tsy maintsy ampiofanina ny maso raha te-handrava ireo vovoka ireo. Azo atao ny mampiofana ny maso mba hahafahany manoratra zavatra tsy hita maso mahazatra. Fa fomba hafa no ilaina mba hahafahan'ny olona mahita taova ho toy ny zavatra ara-batana ao anatin'ny vatany. Ny fakiolten'ny atiny fa tsy ny fahitana ivelany dia tsy maintsy novolavolaina. Ho an'ny olona iray tsy nahazo talenta tahaka izany dia ilaina ny manomboka amin'ny alàlan'ny fampivelarana ny fahaizan'ny introspection, izay fizotran'ny saina. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny introspection dia hovolavolaina koa ny herin'ny famakafakana. Amin'ity fampiofanana ity dia mampiavaka ny saina amin'ny taova izay dinihiny ny saina. Taty aoriana, ny saina dia ho afaka hitady taova iray ara-tsaina ary, amin'ny fampifantohana ny eritreritra azy, dia hahatsapa ny fikapohany. Ny fanampiana ny fahatsapana fahatsapana amin'ny fahitana ara-tsaina dia mamela ny saina hahatakatra tsara kokoa ary avy eo hampivelatra ny fahitana ara-tsaina momba ny taova. Amin'ny voalohany dia tsy tazana ny taova, toy ny zavatra ara-batana, fa kosa torontoronina saina. Taty aoriana, na izany aza, ny taova dia mety ho fantatra mazava toy ny zavatra ara-nofo rehetra. Ny jiro izay ahitàna azy dia tsy hozongozivezina ara-batana, fa hazavana kosa izay entin'ny saina ary manipy ny taova rehefa dinihina. Na dia tazana sy azon'ny saina aza ny taova, dia tsy fahitana ara-batana izany. Amin'ity fahitana anaty ity dia tazana mazava tsara sy takatra tsara kokoa ny taova noho ny zavatra ara-batana matetika.
Misy fomba iray hafa ahitana ny taova ao amin'ny vatan'ny olona iray, izay tsy izany akory, tonga amin'ny fampiofanana ara-tsaina. Midika ho fampandrosoana ara-tsaina ny dikan'izany. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fanovana ny fahatsiarovan'ny olona iray ara-batana azy amin'ny vatany ara-tsaina. Rehefa vita izany dia lasa miasa ny fahitana astral na clairvoyant, ary amin'io toe-javatra io, ny vatana astral dia mazàna mandao ny ara-batana na vetivety nefa mifandray aminy. Amin'ity toe-javatra ity, ny taova ara-batana dia hita ao amin'ny vatan'ny astral any amin'ny vatana astral raha mijery ny fitaratra dia tsy mahita ny tavany fa ny taratra na mifanohitra amin'ny tavany. Izany dia tokony ho alaina amin'ny alàlan'ny fanoharana, satria ny vatana astral dia famoronana vatana vatana, ary ny taova tsirairay ao amin'ny vatana dia manana ny modely manokana amin'ny vatana astral. Ny hetsika tsirairay amin'ny vatana ara-batana dia fihetsika na fihetsika na fanehoana vatana amin'ny vatan'ny astral; ny toe-batana amin'ny vatana ara-batana dia aseho amin'ny vatana astral. Noho izany, ny olona iray amin'ny fanjakana clairvoyant dia mahita ny vatany astral, toy ny amin'ny toe-batana dia mety hahita ny vatany ara-batana izy ary ao anatin'izany fanjakana izany dia hahita ny faritra rehetra ao anatiny sy tsy misy vatany izy, satria ny fahaizan'ny astral na ny marina clairvoyant fahitana dia tsy voafetra ho any ivelany ivelany zavatra toy ny ara-batana.
Betsaka ny fomba fampivelarana ny facultur clairvoyant, saingy iray ihany no atolotra ny mpamaky MOMENTS WITH FRIENDS. Ity fomba ity dia ny saina no tokony hampivoarana voalohany. Rehefa lasa matotra ny saina dia ho tonga voajanahary toy ny vonin'ny hazo amin'ny lohataona ny mpampianatra mampiaiky, raha tiana. Raha terena alohan'ny fotoany ny voninkazo, dia hamono azy ireo ny fanala, tsy hisy voankazo hanaraka, ary matetika ny hazo no maty. Ny fahaizan'ny clairvoyant na psychic hafa dia mety ho azo alohan'ny hahatongavan'ny saina ho amin'ny fahamatorany ary tompon'ny vatana izy, saingy tsy dia hampiasaina firy toa ny fahatsapana ho an'ny adala izy ireo. Clairvoyant antsasaky ny fivoarana dia tsy hahalala ny fomba hampiasana azy ireo am-pahendrena, ary izy ireo dia mety ho fomba hiteraka fahantran'ny saina.
Ny iray amin'ireo antony maro hitomboan'ny saina dia ny manao ny andraikitry ny olona amim-pifaliana sy tsy mikorontana. Fanombohana izany ary izay azo atao amin'ny voalohany. Ho hita raha voazaha toetra fa ny lalan'ny adidy no làlana mankany amin'ny fahalalana. Rehefa manao ny adidiny ny olona dia mahazo fahalalana, ary hafahana amin'ny maha-ilaina an'io andraikitra io. Ny adidy tsirairay dia mitaky adidy ambony kokoa ary ny adidy rehetra vita tsara dia mifarana amin'ny fahalalana.
Namana [HW Percival]